Madax kala duwan oo ka tacsiyeeyey geerida Cali Khaliif | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Madax kala duwan oo ka tacsiyeeyey geerida Cali Khaliif
Madax kala duwan oo ka tacsiyeeyey geerida Cali Khaliif
Madax kala duwan iyo qaar ka mid ah hoggaanka xisbiyada mucaaradka dalka ayaa ka hadlay geeridii ku timid AUN Cali Khaliif Galeyr.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hoggamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa ka tacsiyeeyay Geerida ku timid Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galleyr oo ku geeriyooday Magaalada Jig jiga ee Xarunta dowlad degaanka Soomaali Galbeed.
Qoraal uu soo saaray CC Shakuur ayaa waxaa uu dhammaan Ehelka iyo umadda soo maaliyeed waxaa uu uga Tacsiyeeyay Geerida Marxuumka.
Qoraalka C/raxmaan C/shakuur ayaa u qornaa sida tan:
“Waxaan tacsi u dirayaa ehelka, asxaabta iyo shacabka Soomaaliyeed geerida ku timid Allaha u raxmadee Raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya Prof Cali Khaliif Galayr. Prof Cali wuxuu ahaa siyaasi kulansaday aqoonta casriga ah iyo dhaqanka Soomaalida, geesi ku dhac leh oo aan aragtidiisa la gaban, waaya arag kaalin muuqata ku lahaa sooyaalka siyaasada Soomaaliya. Waxaa lagu xusuustaa loolankii uu la galay duulankii diblomaasiyadeed ee ay Itoobiya ku soo qaaday dawladii Carta ee uu Raysalwasaaraha ka ahaa.
Tartanka xilalka sare ee siyaasada meelna kama harin, madaxweyne, Guddoomiye Baarlamaan, iyo hoggaanka Khaatumo.
Allaha u naxariisto, sabar iyo iimaana Allaha ka siiyo ehelkiisa iyo ummada Soomaaliyeed. Aamiin”
Dhanka kale Maadxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Shariif Shiikh Axmed ayaa ka tacsiyeeyay Geerida Marxuum Cali Khaliif.
“Waxaan umadda Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa geerida Ra’iisul Wasaarihii hore Marxuum Cali Khaliif Galleyr, anigoo si gaar ah tacsi ugu diraya qoyska iyo qaraabada marxuumka.
Allaha u naxariistii Marxuum Cali Khaliif Wuxuu xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii kala duwanaa ee dalka, isagoo muddo fog usoo shaqeynayay qaranka” ayuu yiri Madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed.
Sidoo kale ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre ayaa tacsi u diray ehellada marxuumka iyo dhammaan Umadda Soomaaliyeed.
“Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay Alle ha u naxariistee Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Prof. Cali Khaliif Galayr. Waxaan ku xasuusan doonnaa kaalintii muhiimka aheyd ee uu kasoo qaatay dadaallada dib-u-dhiska dalkeena إنا لله وإنا إليه راج” ayuu yiri Mudane Xasan Cali Khayre.
Maqaal horeCali Khaliif Galeyr oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga
Maqaal XigaSomaliland oo war xasaasi ah ka soo saartay doorashada Soomaaliya